पार्टी विघटन : चेतावनी कि उडन्ते कुरा ? - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २२, २०७४-गएको साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै ‘पार्टी विघटन गर्न सकिने’ भन्ने समाचारले मेरो ध्यान तान्यो । साउन पहिलो साता चुनावी समीक्षा गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा सहभागीहरूले अध्यक्ष दाहाल अर्थात् ‘प्रचण्ड’ लाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै टिप्पणी गरेछन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी मौलायो । पार्टी नीतिमुखी होइन, नेतामुखी भयो । जनतामा जान सकिएन ।’ आदि, इत्यादि । उनी पनि के कम ? प्याट्ट भनिदिएछन्, त्यसो भए पार्टी नै विघटन गरौं । उनलाई थाहा छ, पार्टीका नाममा खान पल्केकाहरूलाई योभन्दा ठूलो चेतावनी अरू हुन सक्तैन । फेरि यो चेतावनी सुधार्न वा सुध्रनका लागि पनि थिएन । प्रचण्डको यो उडन्ते कुरा हो भनेर जान्दाजान्दै पनि यसबारे केही विचारविमर्श गर्न मन लागेको छ । ‘प्रचण्ड’ ले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना सैद्धान्तिक ‘गुरु’ मार्क्स र एंगेल्सलाई सम्झेछन्, मैले महात्मा गान्धीलाई सम्झें । उनले के भने भनेर होइन, नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदो दलीय अव्यवस्था र नेतृत्वमा बस्नेहरू नै यसको मुख्य स्रोत भएकाले यो विषय मेरो रोजाइमा परेको हो । पार्टी प्रणाली मेरो अध्ययन र रुचिको विषय पनि हो ।
स्वाइन फ्लुबाट जोगिन सावधानी ›